हाम्रो विकासका बाधक पक्ष | Nagarik News - Nepal Republic Media
हाम्रो विकासका बाधक पक्ष
२ फाल्गुन २०७७ ८ मिनेट पाठ
आगामी दिनलाई निराशावादी र नकारात्मक चेतबाट मात्र नहेरौं । पक्कै पनि थोरै सम्हालिएर बाटो पहिल्याउने प्रयत्न गरयौ भने अवश्य एकपटक उज्यालोतर्फ उन्मुख हुने नै छौ । प्रकृतिको नियम नै हो विनाशपछि विकास । अँध्यारोपछि उज्यालो । कुशासनपछि सु्शासन । त्यागपछि प्राप्ति । त्यसैले धैर्य गर्नुस् जसरी पनि हामी अघि बढनुको अर्को विकल्पै छैन । मार्टिन लुथर किडको एउटा भनाइ याद आयो– यदि तिमी उड्न सक्दैनौ भने दौड, दौड्न सक्दैनौ भने हिंड् र हिंड्न पनि सक्दैनौ भने घिस्र तर जसरी हुन्छ अघिचाहिँ बढ ।” अन्ततः अघि बढनु नै छ ।
विकास र समृद्धिको उत्कर्षमा पुगेका देशहरूको अवस्था पनि कुनै बेला हाम्रोजस्तै थियो । अहिले शुशासन, समानता र स्वतन्त्रताका नमुना मानिएका युरोप अमेरीकामा पनि हिजो हाम्रोमा जस्तै कुशासन, विकृति, विसंगति, भेदभाव, भ्रष्टाचारको डंगुर नै थियो । इतिहासले त्यही भन्छ । मात्र उनीहरूले यस्ता कालो बादललाई छिटो छिचोले र अघि बढे । हामीले अहिलेसम्म छिचोल्न नसकेको मात्रै हो । ती देश कसरी विकासको गतिमा उडन सके ? तर हामी घिस्रिन पनि किन सकिरहेका छैनौ त ? यसलाई यो आलेखमा दुई पाटो बाट चर्चा गरौं ।
पहिलो पाटो – विकास र राजनीति
हाम्रा नजिकैका छिमेकी देश हुन् थाइल्याण्ड र हङकङ । त्यहां केही वर्षदेखि विभिन्न राजनीतिक माग राखेर आन्दोलन र विरोध चर्किरहेको छ । जनता राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको माग राख्दै आन्दोलित छन् । प्रदर्शनहरू गरिराखेका छन । त्यहाँ पनि धेरथोर तोडफोड, विध्वंस भइरहेकै छ ।तर यथार्थमा उनीहरूको त्यो राजनीतिक आन्दोलनले जनताको जीवनस्तर, प्रगती र परिवर्तनमा कुनै असर गरेको छैन । काम गर्ने मजदुर काम गरिराखेकै छन । पढाउने शिक्षक पढाइरहेकै छन । कृषि गर्ने कृषकले उत्पादन गरिराखेकै छन । उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलिराखेकै छन । नयाँ बन्नुपर्ने विद्यालय, अस्पताल, पुलपुलेसा बनिराखेकै छन्।
वाार्षिक हुनुपर्ने तलव वृद्धि भइरहेकै छ । बढ्नुपर्ने जनता र देशको आयस्रोत बढिराखेकै छ । त्यसो त यस्ता प्रदर्शन, विरोध या सरकारको फेरबदलले जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा कुनै असर गरेकै छैन । भौतिक विकासको गतिलाई रोकेको छैन । पात्रा को आयो भन्दा पनि संस्कृति के बनायौ भन्ने कुराले मात्र अर्थ राखेको छ ।यसको मतलव राजनीतिक अस्थिरताको नाममा हाम्रोमा जस्तो विकासको गति ती देशमा प्रभावित हुँदैन । भएको छैन ।
अनि सुशासनका लागि नमुनाको रूपमा लिइने बेलायत र अस्ट्रियालाई पनि हेरौं । यी दुवै देशमा सुशासन छ । समृद्धि र विकास त छंदैछ । तर, हामीले देखिरहेकै छौं । बेलायतको सदनमा युरोपियन युनियानमा रहने नरहने मुद्धाले मात्रै पटकपटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइराखेका छन । अझै यही मुद्धाले राजनीतिक विवाद लम्बिदो छ । अस्ट्रियाका चान्सलर सेबेष्टन क्रुज समय नपुग्दै पदबाट हटाइए । उनी फेरि जनवरी २०२० मा चान्सलर भए । अर्थात् असमयमा नै सरकार परिवर्तन भइरहयो । यसको मतलब हामीले समृद्ध र सुशासित सोचेका देशहरूमा पनि पात्राहरू हट्ने र फेरिने भइराख्छ । तर त्यसले ती देशको दिगो विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा नकरात्मक असर गरेको हुँदैन ।
मेटी फ्रेडिक्सन उनको पार्टी सोसल डेमोक्रयाटसको एकल बहुमतबाट डेनमार्कको प्रधानमन्त्री बनेकी होइनन् । उनको क्याविनेट निर्माणमा सोसल पिपल्स पार्टी र सोसल लिवरल पार्टीको एलायन्स छ । जसलाई रेड ग्रिन एलायन्स भनिन्छ । फिनल्याण्डको नेतृत्व गरी राखेकी विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनाको पार्टीको पनि एकल बहुमत छैन । अर्थात् नर्डिक देशका जनताले एउटै दललाई बहुमत त कमै मात्रमा दिएको इतिहास छ । धेरै लामो समयदेखि यी देशहरूमा एलायन्स बनाएर सरकार बनाउने संस्कार नै बनेको छ । तर विरलैबाहेक हरेक सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गरेको दृष्टान्त छ । उल्लिखित देशहरूमा आन्दोलनको माझमा पनि विकास अघि बढिरहेकै छ । बहुमतको बाबजुद स्थिर सरकार बनेकै छ । उसो भए उनीहरूको मा किन सम्भव भयो ? हामी किन सकिरहेका छैनौं ? यसको सिधा र सरल जवाफ हो– उनीहरू विधि र पद्धतिलाई पछयाउँछन्।
राजनीति र विकासको नीतिलाई आइसोलेट गरेर हेर्छन् । तर हामी अझै पनि राजनीति र विकासलाई फरकफरक चश्माले हेर्न अभ्यस्त भइसकेका छैनौं । आज दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी देशहरू बंगलादेश, श्रीलंका र भारतले पनि राजनीति र विकासलाई फरकफरक चश्माले हेर्न थालिसकेका छन् । पाकिस्तान त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ । अफगानिस्तान अभ्यास गरिराखेको छ । विकास व्यक्तिले नभै विधिले गर्ने वातवरण निर्माण गरौं । जुन आज हामीले समृद्ध देखेका देशले हिजै गर्न सके ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संघर्ष राजनीतिक मुद्धामा सीमित होस । नकि विकासका लागि व्यवधान नबनोस् । नागरिकको जीवनस्तर उन्नत बनाउन तगारो नबनोस् । थाइल्याण्ड, बेलायत, डेनमार्कको यो यथार्थतालाई मनन गरौं ।
अर्को तथ्यलाई पनि हेरौ । द ग्लोवल इकोनमीले सन् २०१९ मा विश्वका १९५ देशको राजनीतिक स्थिरताको स्तरीकरण गरेको छ । २.५ अंक ल्याउने देशलाई राजनीतिक स्थिरता बलियो भएको मानिएको छ । जुन अंक कुनै पनि देशले प्राप्त गरेका छैन । त्यस्तै माइनस (२.५ ल्याउने देशलाई राजनीतिक समस्याबाट ग्रस्त मानिएको छ । जुन अंकभन्दा तल पनि धेरै देशहरू छन् । सोमालिया, लिविया, अफगानिस्तान, इराक यमन, र सिरिया यस्ता देशमा समेटिएका छन् । यो तथ्यांकमा नेपाल राजनीतिक स्थिरताको हकमा इन्डोनेसिया, रसिया, थाइल्याण्ड, ब्राजिल, छिमेकी देश भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । नेपालले माइनस (०.४७ अंक प्राप्त गरेको छ भने भारतले माइनस (०.७० पाएको छ । नेपालको अवस्था बहराइन इजरायल, इजिप्ट टर्कीभन्दा पनि अगाडि छ । अब हामी आफै कल्पना गरौं , राजनीतिक अस्थिरताको बिचमा पनि इन्डोनेसिया सन् २०३० सम्म विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रभित्र पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । बहराइन, इजरायल जस्ता देशले हजारौं नेपालीलाई काम दिइरहेका छन् । हामीले भन्ने गरेको राजनीतिक अस्थिरताले ती देशको समृिद्धमा कुनै असर गरेको छैन । भारत, रसिया विश्वका शक्तिशाली हुन तर पनि स्थिर राजनीति भएका देशमा पर्दैनन् । नेपालभन्दा राजनीतिक अवस्था अस्थिर मानिएका अधिंकांश देशका जनताको जीवनस्तर नेपालीको भन्दा धेरै माथि छ । समानता र सुशासनको स्तर उच्च छ । अनि विकासको गति धेरै अगाडि छ । हो तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ कि उनीहरूले समृद्धि र विकासको नीतिमा राजनीतिलाई घुस्न दिएका छैन्न । जुन हामी गरिराखेका छैनौं । विकास कुनै दल विशेषले गर्ने कुराभन्दा पनि सिस्टमले गर्छ भन्ने मान्यताको विकास गरौं । राजनीतिक खिचतानीको बाबजुद ती देशमा जस्तै हाम्रोमा पनि विकास सम्भव होस ।
सोही रिपोर्टमा उरुग्वे, डोमिनीका, फिजी, लाओस, बुल्गेरिया, क्युवा लगायतका देशलाई राजनीतिक स्थिरताको दृिष्टले अगाडि मानिएको छ । तर यी देशको आर्थिक अवस्था जनताको जीवनस्तर र सुशासनको स्तर हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार त एउटा तानाशाही व्यवस्थामा पनि हुनसक्छ । तसर्थ आधुनिक विश्वमा विकास विधि र पद्धतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । व्यक्ति र व्यवस्था भनेको गौण पक्ष हो ।
दोस्रो पाटो – जनताको सोच
लोकतन्त्र र सुशासनको अभ्यासमा भर्खर बामे सर्दै गरेका हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आज हामीले समृद्ध देखेका देश समृद्ध हुनुमा नेता अब्बल भएर मात्र होइन उत्तिकै जनता पनि इमानदार भएर संभव भएको हो । उसो भए इमान्दारीताको अभ्यासमा कतै हामी चुकिरहेका त छैनौ । यसका पनि केही नजिर हेरौं ।
करिव ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा राजनीतिमा कति संलग्न छन् होला ? अनि राजनीति गर्नेले मात्र राजनीति गर्छ कि सबैले राजनीति गर्छन् ? हाम्रोमा यो जटिल प्रश्न बनेर खडा भएको छ । कतिपय दलमा त कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै छन । विकसित देशका नागरिकमा यो समस्या देखिंदैन । हाम्रोमा जस्तो घरघर र टोलपिच्छे दलका नेता कार्यकर्ता भेटिंदैन । अधिकांशका लागि आआफ्नो पेसाव्यावसाय नै पहिलो प्रथामिकतामा पर्छ । अब हामीले पनि राजनीति गर्नेलाई गर्न दिऔं । अरूले बुझौं । गलत गरे मतमार्फत दण्ड दिऔं । राम्रो गरे प्रोत्साहन गरौं । सबैले राजनीति गरेर समय बर्बाद नगरौं ।
दोस्रो, मानौ एसइई परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । किसानको बाली राम्रो भएन । बारी बाँझो राखेर खाद्यन्न बेसाउने बानी परयो । हुँदाखाँदाको अधिृकृतको सम्मानित पेशा छोडेर विदेश भासियौंं । अमुक व्यक्तिले व्याापारमा घाटा बेहोरयो । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पुल बगायो । तर हामी कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयलाई पनि राजनीतिसंग जोडेर विरोध गरिरहेका हुन्छौं । राजनीतिले गर्दा नै सबै बिग्रियो भनिराख्दा राजनीति बाहेकका सबै कुरालाई सुधार्न आआफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न पनि गर्ने कि । यो कोणबाट पनि सोचौं । संसार बदल्नु छ भने सुरुवात आफैबाट किन नगर्ने ।
अन्त्यमा प्रतिस्पर्धामा कमजोर ठहरिंदा पनि हामी कतिले आफ्ना र आफन्तलाई जागिर लगाउन नेतालाई दबाब दिने गरेका छौं । एकपटक मम भनेर सम्झौ त । स्वदेश तथा विदेशमा छोराछोरीको छात्रवृत्तिका लागि कति मन्त्री र सांसदलाई अर्को पटक पनि भोट चाहिएला नि भन्दै घुर्काउने गरेका छौं । ठण्डा दिमागले सोचौ त । निजामती सेवामा सरुवाबढुवाका निम्ति हामी कसरी नेतालाई प्रलोभनमा पार्ने गर्छौं । एकपटक निष्पक्ष भएर घोत्लनुस् त । अनि विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपकुलपति र रेक्टर जस्ता पद प्राप्त गर्न हामी कति चाकडी गर्ने गर्छौ । यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ हामी राजनीतिक आस्था र पावरको आधारमा नियुक्ति चाहन्छौं । अब भन्नै पर्छ नेताले मात्रै बिगारे भनिराख्दा कतै हामीले उनीहरूलाई बिग्रन बाध्य त पारिराखेका छैनौ । हाम्रा गलत दबाब र प्रभावले अर्को योग्य पात्राले अवसरबाट वञ्चित हुन त परेको छैन।
तसर्थ सोच बदलौं । गलत संस्कार बदलौं । आफू बदलिएर अरूलाई बदलिन प्रेरित गरौं । फेरि पनि मार्टिन लुथर किडले भनेजस्तै जसरी पनि अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छंदैछैन । जसका लागि ती देशहरूले जस्तै विधिलाई बलियो बनाऔं । अनि हामीले प्रवृत्ति पनि परिवर्तन गरौं ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ १६:५४ आइतबार